Ngosi mmịfe Software maka Windows 8
> Resource> Windows> ngosi mmịfe Software maka Windows 8: ka gị onwe gị ngosi mmịfe
Ngosi mmịfe bụ otu n'ime ihe ndị magburu onwe isi mmalite akpọghachite ndị gara aga na-echeta n'ihu gị anya. Ọ bụrụ na ị na-achọ inweta a magburu onwe batara ya n'obi ná ndụ gị, mgbe ahụ, na-eke specialized ngosi mmịfe bụ nhọrọ kasị mma n'ihi na. Ugbu a na DVD Slideshow Builder Deluxe - a ngosi mmịfe software N'ihi na Windows 8, ị nwere ike mfe ime ka a ngosi mmịfe na pụrụ iche na atụmatụ. Site na iji nke a ngosi mmịfe software, ọbụna onye nkịtị nwere ike ịmepụta pụtara ìhè slideshows ha foto oyiyi enweghị ihe ọ bụla foto ihe ọmụma.
N'ebe a, anyị ga-ahụ otú na-eme ka a ngosi mmịfe na nke a ngosi mmịfe software N'ihi na Windows 8 nzọụkwụ site nzọụkwụ. Dị nnọọ eso nke a n'ọnụ na ike sachaa slideshows dị ka ọchịchọ gị.
1 Tinye faịlụ ka a ngosi mmịfe software
Mgbe na-agba ọsọ DVD Slideshow Builder Deluxe, ị ga-ahụ na e nwere abụọ ụdịdị: Standard mode na elu mode. Standard Mode-enyere gị aka bulie a tupu-e ịke si ọtụtụ ka kama izubandu foto gị; mgbe Advanced Mode-enye ndị ọzọ selections n'ihi na ị na hazie slideshows na ụdị egwu ikwu n'ụzọ, mmetụta, Akara ókwú na ndị ọzọ. Ebe a ka na-Advance mode dị ka ihe atụ.
Na Hazie taabụ, na-amalite na-eme gị onwe gị ngosi mmịfe site na ịpị "Tinye Files" button. Mgbe mbubata foto gị ma ọ bụ vidiyo ka storyboard na kọmputa gị. Ị nwere ike okpukpu abụọ pịa lekwasịrị media na dezie na mmapụta elu windows.
2 hazie ngosi mmịfe
Nke a ngosi mmịfe software na-enye ọtụtụ nhọrọ ịgbakwunye dị iche iche mmetụta gị foto na themes. Ka ihe atụ, i nwere ike tinye tinye n'okirikiri na "hazie" taabụ site na ịpị "Music" button. Ọ na-nwere nọmba nke wuru na-anya-akụta ikwu n'ụzọ dị ka 3D, Alpha, Adalata, Slide-eji ire ụtọ, ect. Dị họrọ ntughari ka amasị gị. Wee pịa "Intro / Ebe E Si Nweta" mkpịsị aka ịgbakwunye ihe Intro ma ọ bụ Ebe E Si Nweta gị ngosi mmịfe dị ka isiokwu.
3 Save ngosi mmịfe ma ọ bụ ịkọrọ online
Ugbu a na-aga "Mepụta" taabụ, na ịhụchalụ gị ngosi mmịfe. Ọ bụrụ na ị afọ ojuju na ọrụ, họrọ a nhọrọ na ekpe ịzọpụta gị ngosi mmịfe dị ka obodo faịlụ. I nwekwara ike ozugbo bulite ngosi mmịfe ka Youtube ma ọ bụ ọkụ na-DVD maka nchebe.
Ugbu a na ị arahụ site dum usoro nke na-eme ihe ngosi mmịfe, dị nnọọ ibudata a ngosi mmịfe software N'ihi na Windows 8 na ina malitere!
Best Video Onye kere Software maka Windows 8